SCCM Inverview प्रश्नहरु र उत्तर 2018 मा पूछा "आईटीटी टेक स्कूल
17 अप्रिल 2018
SCCM प्रश्न र उत्तर 2018 मा Inverview मा सोधिने प्रश्न
SCCM प्रमाणिकरणको अवलोकन
SCCM साक्षात्कार प्रश्न र जवाफ
टर्म एसएमएस प्रदायक परिभाषित गर्नुहोस्
टर्म सीमित संग्रह परिभाषित गर्नुहोस्
के सदस्यले विभिन्न संग्रहहरूको सक्षम हुन सक्नुहुनेछ संग्रहमा समावेश वा बहिष्कार गरियो?
Windows सर्भर अद्यावधिक सेवा वा WSUS कसरी प्रयोग गरिन्छ?
के CM (कन्फिगरेसन प्रबन्धक) 2007 प्याकेजिङ्ग सफ्टवेयर यसको वितरणमा प्रदान गर्नुहुन्छ?
क्लाइन्ट कन्फिगरेसन प्रबन्धक कन्सोल क्लाइन्ट स्थापना हुनु अघि प्रकट हुन सक्छ?
के सबै संग्रहहरू वृद्धिशील अपडेटहरू पाउनुहुन्छ?
सबै अज्ञात कम्प्युटर सङ्कलन शब्दको वर्णित गर्नुहोस्?
कुन वेबसाइटमा पूर्वनिर्धारित व्यवस्थापनको संख्यामा हुन सक्छ?
SCCM 2007 मा पाइने गन्तव्यहरूको विभिन्न प्रकारको नाम दिनुहोस्।
के म सङ्कलन गर्नका लागि केवल लिनक्स सर्भरहरू वा केवल एक म्याक कम्प्युटर सञ्जाल र त्यसका लागि मात्र SCCM फ्रेमवर्क प्रयोग गर्न सक्षम हुन सक्ूँ?
स्थानीय र मिश्रित मोड बीच अलग
टर्म सफ्टवेयर म्यामिङको लक्षण?
As SCCM पीसी र नेटवर्क प्रबन्ध गर्न को लागी सबै भन्दा सामान्य उपयोग सफ्टवेयर सुइट को बीच एक स्टैंडआउट छ SCCM प्रमाणीकरण धारकहरू खोजी र प्रभावी ढंगले दुवै व्यापार र गैर-फाइदा एसोसिएशनहरू द्वारा खरीद गरिएको छ। यूएसमा कन्फिगरेसन प्रबन्धकले एक वर्षको अमेरिकी डलर 82,000 को वेतन दिन्छ। ग्राहक र साथी सर्भरहरूको मूल्यांकन गर्न पहिचान गरिएको आशावादी व्यक्तिहरूलाई दिएको वरिपरि एससीएमएम ह्यान्ड्स-आधारित (प्रमाणपत्र पछि प्राप्त गर्ने प्रतियोगी अनुभवहरू) तयारी गर्न र यी विशेषज्ञहरूले यस्ता उपकरणहरू पठाउन, निरीक्षण र ताजा गर्न सक्छन्। SCCM विशेषज्ञहरूले अतिरिक्त प्रणाली प्रणाली र प्रणालीहरू समायोजन गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा कन्फिगरेसनहरू पछ्याउँदछ। तिनीहरूको भाग फलस्वरूप परिचालन प्रवीणता बढाउन र प्रणालीको सुरक्षा कोयम राख्न आवश्यक छ। यहाँ केहि पूछताछहरू छन् कि तपाईं एक SCCM प्रमाणीकरण धारकको रूपमा कन्फिगरेशन प्रबन्धक को पोस्ट को लागि बैठक को लागी सामना गर्न सक्छ।
एसएमएस आपूर्तिकर्तालाई पनि WMI वा विन्डोज व्यवस्थापन उपकरण आपूर्तिकर्ताको रूपमा भनिन्छ। यो कन्फिगरेसन प्रबन्धक वा SCCM सफ्टवेयरको CM कन्सोलद्वारा प्रयोग गरिन्छ र "पढ" र "अतिरिक्त" प्रणाली प्रणाली प्रणाली कन्फिगरेसन-प्रबन्धक साइटको डेटाबेसमा पहुँच प्रदान गर्दछ।
64-bit अपरेटिङ सिस्टम कन्फिगरेशन प्रबन्धक कन्सोललाई समर्थन गर्न सक्छ
वास्तवमा। जबकि CM कन्सोल SCCM 32-bit प्रोग्राम संरचना हो, यो अतिरिक्त 62-bit सञ्झ्याल अनुकूलन मा चलिरहेको रहन सकिन्छ।
सबै संचयहरू तिनीहरूका सीमित जमावहरूको सब्सक्राइब हुन्। जुनसुकै बिषयमा एकत्रित बनाउने डिजाइनरले आफ्नो सीमित संचयलाई संकेत गर्नुपर्दछ।
वास्तवमा, अब यो सम्भव छ। नयाँ 2012 सीएम (कन्फिगरेसन प्रबन्धक) सँग यसको लागि मानकहरूको नयाँ प्रबन्ध छ। यी "समावेशी" र "पट्टी" नियमहरू छन्। यी सिद्धान्तहरू अरूको सहभागी हुने संचयको विचार र निषेधलाई समायोजित गर्दछ।
WSUS फायदाले प्रबन्धकलाई सबै भन्दा हालको वस्तुलाई Microsoft बाट एक पीसीमा रिफ्रेश हटाउन र प्रबन्धकहरूलाई विन्डोज कार्यरत ढाँचामा दौडिन्छ।
कन्फिगरेसन प्रबन्धकले कुनै पनि प्रकारको सफ्टवेयर परिसंचरण तिर बन्डल गर्न सक्दैन।
घटनामा एक प्रकटीकरण प्रविधी त्यहाँ छ, कन्सोल देखिन सक्छ। यद्यपि, यसको हाइलाइटहरू सहित सफ्टवेयर फैलावट, स्टक, र अरूको बीचमा सफ्टवेयर रिफ्रेशेसन व्यवस्थापन गर्दा केवल ग्राहकहरू पूर्ण रूपमा पेश भएको बेला खुलासा गरिनेछ।
होइन, कन्फिगरेसनको लागि प्रयोग गरिने प्रयोग नियमहरूको एक विशिष्ट वर्ग वृद्धिशील अद्यावधिकहरू द्वारा अपूर्ण छैन।
यस सभामा दुइटा लेखहरू छन्, जसले ग्राहकहरूलाई काम गर्ने प्रणालीहरूलाई पीसीमा पठाउँदछ, जुन कन्फिगरेसन प्रबन्धकद्वारा निरीक्षण गरिएको छैन। कार्य प्रणालीहरू यस तरिकामा CM को अस्पष्ट छन्। यी पीसीहरूमा ती व्यक्तिहरू समावेश छन् जुन CM द्वारा भेटिएन। CM मा सार्नु हुँदैन; वा, पीसीहरू जसमा सीएम पेश गरिएको छैन।
जब क्लाइन्टले विभिन्न व्यवस्थापनलाई डिजाइन गर्न सक्दछ साइट भित्र भित्र, केवल एक मात्र तिनीहरू पूर्वनिर्धारित व्यवस्थापन बिन्दु हुनसक्दछ र त्यसैको रूपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। धेरै डिफल्ट प्रबन्धक फोकस गर्ने एउटा दृष्टिकोण भनेको ग्राहकले विभिन्न व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दछ एनएलबी वा सञ्जाल लोड ब्यालेन्सलाइज क्लस्टरमा। त्यसोभए उनले यो एनएलबी क्लस्टर डिफल्ट प्रबन्धन डिजाइन गर्न सक्दछन्। बिन्दु
आवश्यक साइट: यो साइट महान संघहरु संग नेटवर्क को ग्राहकहरु को प्रबंधन को लागी छ।
वैकल्पिक साइट: यो साइट रिजर्भेसन क्षेत्रमा अवस्थित ग्राहक व्यवस्थित को लागि पदार्थ को फैलाव को नियंत्रित गर्न को लागी हो। यी सञ्जालहरूको जडानले ट्राफिक क्षमतालाई बाधा पारेको छ।
अभिभावक वेबसाइट: यो साइट प्रगतिशील प्रणाली को सर्वोच्च स्तर मा स्थित छ।
Tyke Site: एक साइट कि एक संरचना को अंदर एक निर्मित साइट को अंतर्गत गिरता छ र साइट देखि अधिक डेटा हो tyke साइट को रूप मा जानिन्छ।
कन्फिगरेसन प्रबन्धकले हरेक विशेष प्रकारका ग्याजेटहरूको लागि असाधारण र विशेष आईडी भण्डारण गर्दछ जुन म्याक पीसी व्यवस्थाहरू, विन्डोज पीसी र पीसी व्यवस्थित गर्न, लिनक्स पीसीहरू र त्यसका साथै अन्य समावेश गर्न सक्दछ। ग्राहकले अर्को संचय गर्न सक्दछ जुन एक विशेष प्रश्नलाई नियन्त्रण गर्दछ, जुन विशेष आईडी छ जुन ती ग्याजेटहरू फर्काउँछ।
मूल मोड एक संरक्षित व्यवस्था हो र माईकिंगको लागि मानक सुरक्षा कन्वेंशनहरू प्रयोग गर्दा राम्रो एन्क्रिप्शन र प्रमाणिकरण समायोजन गर्दछ। यो पनि PKI सँग जोड्न र अनलाइन अनलाइन ग्राहक व्यवस्थापन ढाँचा बलियो गर्न सक्छ।
मिक्स गरिएको मोडले PKI संगठनलाई आवश्यक छैन र यस प्रकारको कुनै पनि प्रकारको निर्भरता छैन। यसले ग्राहकहरू जो SMS 2003 फारम चलाउँछ।
सफ्टवेयर मीटिंगरले सीएम वा कन्फिगरेसन प्रबन्धकका विशिष्ट ग्राहकहरूमा सफ्टवेयरको उपयोगको साथ पहिचान गरेको सबै डेटाको अवलोकन र संचयलाई समेट्छ।
तपाईं SCCM प्रमाणीकरण पछि र वेबमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ। वेब अनुदेश प्रशासनिकमा ड्राइभिंगले तपाईंलाई ह्यान्ड-अन पहिचान गर्न सच्चाईमा SCCM सफ्टवेयरको प्रयोग र उपयोगको साथ पहिचान गर्न दिन्छ। शिक्षकले क्लास चलाए र तयारी गर्दै, वेबमा र विच्छेदन गरिएको कक्षा कोठा, हड्डी पेपर सेट, सिक्न सामाग्री र विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिका सम्पदाहरू तपाईंलाई कुचाइ बिना परीक्षा र हवाको लागि तयार हुन सक्दछ।
18 सबैभन्दा लोकप्रिय डेटा विज्ञान साक्षात्कार प्रश्नहरू र जवाफहरू